ဤစီးရီးဖျက်ဆီးစက်ကိုအဓိကအားဖြင့်သန့်ရှင်းသောစပါးနှင့်ကျောက်တုံးများခွဲခြားရန်အသုံးပြုသည်, ဂျုံနှင့်ပြောင်းဖူး. dual တုန်ခါမော်တာတပ်ဆင်ထားသည်, ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားမြင့်သည်, ကောင်းမွန်သောအဆင့်သတ်မှတ်ခြင်းနှင့် sepa ……
ကမ္ဘာ့လူကြိုက်အများဆုံးအဓိကအစားအစာအဖြစ်, ဆန်ကျယ်ပြန့်စိုက်ပျိုးသည်. သို့သော်, စပါးကို၎င်း၏ကုန်ကြမ်းပုံစံဖြင့်မစားနိုင်ပြီးပြုပြင်ရန်လိုအပ်သည်. ယနေ့ခေတ်ဆန်စက်များကိုခေတ်မီနည်းပညာဖြင့်တည်ဆောက်ထားသည်။
﻿ The rice husker machine is designed for separate of paddy from the brown rice and paddy on the principle of density.this rice husking machine can be equipped with other paddy rice husker machine,A ......
﻿ small rice milling machines are designed to provide higher yield and profitability for the mini rice milling machine. ကျွန်ုပ်တို့၏ဆန်းသစ်သောဆန်ထုတ်လုပ်မှုနည်းစနစ်များသည်တွင်းထွက်အမှိုက်များကိုလျော့နည်းစေသည်, manp